Ihe ị ga - eme na njem rue Sydney | Akụkọ Njem
Ihe ị ga - eme na njem rue Sydney
Susana Garcia | | Australia, General, Oceania, Sydney
Ekwesịrị m ikwupụta, otu n'ime njem nrọ m bụ ịhụ Australia, Australia niile, ọ bụ ya mere m ji aga na weebụsaịtị mgbe mba a dị ukwuu pụtara. Ọ bụ ebe anyị ga-ahụ ụdị pụrụ iche, obodo dị iche iche na ọdịdị nke ga-ewepụ ume anyị. Mana taa anyị ga-anọ Sydney, otu n'ime obodo ndị ama ama na akara mgbe ị na-ekwu maka Australia.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na Sydney bụ isi obodo Australia n'ihi etu esi mara ya nke ọma, mana n'eziokwu isi obodo bụ Canberra. A mara Sydney nke ọma maka akara dịka Opera House. Mana nke a abụghị naanị ihe ị ga - enwe ike ihu ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịga njem n’obodo a, ebe enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-eme ma lee ma eleghị anya ị maghị.
1 Opelọ Opera Sydney
2 Rigoro n'ọdụ ụgbọ mmiri Harbor
3 Gaa na Taronga zoo
4 Sunfọdụ anyanwụ na Bondi Beach
5 Gaa na Nkume
6 Maa ụlọikwuu na Cockatoo Island
Opelọ Opera Sydney
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, anyị ga - ebido nke kachasị mkpa, nke ahụ bụ na ọfụma opera nke opera maara nke ọma gburugburu ụwa. Ọ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri, na njem okirikiri, ebe ị nwere ike ịga ije mgbe ị nwere ike ịhụ ụlọ a site na nso. Ma ọ dịkwa ike ime a ịgagharị na opera, n'azụ Mpaghara, ebe ha ga-akọwa etu bọọlụ, opera na ejije na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ahụ. Kemgbe afọ 2007 ọ bụ ebe ihe nketa ụwa, ma wuo ya na 1973. Taa, ọ bụ ebe ị ga-ahụ ụdị ọrụ na egwu egwu niile.
Rigoro n'ọdụ ụgbọ mmiri Harbor
Ebe ọ bụ na anyị nọ mpaghara a, ị nwere ike iji ya gbagoro n'elu akwa mmiri ọdụ ụgbọ mmiri aha otutu 'la percha'. A na-eme akwa a ka ọ bụghị naanị ụgbọ ala nwere ike ịgagharị na ya, kamakwa ndị na-aga ụkwụ na ịnyịnya ígwè. Anyị niile nwere ike gafere ya, mana ọ bụrụ na enwere ahụmịhe pụrụ iche ọ bụ nke rịgoo n'elu iji tụgharịa uche n'ọnụ mmiri dum na opera site n'echiche dị ịtụnanya. Onye ọ bụla nwere ike ịmegharị njem ndị a, ọ bụ ezie na ekwesịrị ikwu na ọ bụrụ na ị nwere vertigo, ọ ka mma ịhapụ.
Gaa na Taronga zoo
N'ime ogige zoo Taronga enwere ihe ruru puku abụọ na narị iteghete. Ọ bụ njem dị mma ma ọ bụrụ na anyị esoro ụmụ anyị soro, ebe ọ bụ na ha ga-enwe ike ịhụ anụmanụ kachasị atụ nke Australia, dịka mara mma koalas na m na kangaroos. E nwekwara agụ owuru, ozodimgba, agụ owuru, na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume iwere ngwugwu Roar na Snore, maa ụlọikwuu na zoo n'otu abalị, ahụmịhe na-atọ ụtọ maka ụmụaka.
Sunfọdụ anyanwụ na Bondi Beach
Ikekwe ị maraworị Bondi Beach a ma ama. Ọ bụ naanị 10 kilomita site na obodo, na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime ndị na-ekwo ekwo. Ọ bụ osimiri ahụ na-egosi mgbe niile n'oge ekeresimesi na telivishọn, ebe ọ bụ na ha nọ n'etiti oge ọkọchị ebe a bụ oge oyi ma ọ bụ ọdịnala ugbu a iji okpu Santa gaa osimiri. N’ebe a juru aja, a na-eme ụdị ihe dị iche iche kwa afọ, na-eme ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ dị mma. Ma ọ bụrụ na ọ nweghị, anyị nwere ike ịmalite sọfụfụ na mmiri ya, ma ọ bụ na-aga n'okporo ámá nke Campbell Parade, ebe enwere ụlọ ahịa ejiji na ebe a na-egwu mmiri, ụlọ mmanya na ụlọ nri. Na mgbakwunye, n'akụkụ osimiri a enwere ndị ọzọ, dịka Palm Beach ma ọ bụ Coogee Beach, nke nwekwara ọtụmọkpọ ha.
Dị ka ọtụtụ ndị ga-ama, Sydney bụ nke bụbu ụta ntaramahụhụ, site na akụkụ a nke akụkọ ntolite ya, bụ ebe a maara dị ka The Rocks. Ọ dị nso na okirikiri Quay, ị ga-eje ije ebe ahụ na nkeji ise. Ọ bụ ebe ochie n'obodo ahụ, ebe ị ga-ahụ ụzọ izizi ahịhịa n'okporo ámá na-ete okpokoro na ụzọ ndị yiri ka ha enweghị ebe ọ bụla. Ọ bụ ebe taa bụ ọdịbendị, yana ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ebe a na-edebe ihe ngosi, yana ebe a na-ahụ ụlọ mmanya kacha ochie n'obodo ahụ. Na ngwụsị izu ị nwere ike ịga nnukwu ahịa njem, a na-ahazi ọpụpụ iji mụta banyere akụkọ ihe mere eme nke agbata obi a.
Maa ụlọikwuu na Cockatoo Island
Agwaetiti Cockatoo nwere aha mara mma, mana ọ dị na ọdụ ụgbọ mmiri nke obodo ahụ. Ọ dị n'azụ àkwà mmiri ahụ anyị rịgoro n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Nwere ike ịnọọ abalị na-ama ụlọikwuu n'ime ya, dị ka a ga - asị na anyị nọ n'etiti okike, mana ịbụ otu nzọụkwụ site na etiti obodo. Ya mere, anyị nwere ike iteta n'ụfọdụ n'ime echiche kachasị mma, nke ga-abụ ahụmịhe ọzọ echefughị ​​echefu iji gbakwunye na nleta a. Nwere ike iweta ụlọikwuu ahụ ma ọ bụ gbazite ya na agwaetiti ahụ, enwekwara njegharị iji mụta banyere akụkọ ntolite ya, ebe ọ bụ na mbụ l'ọ bụ mkpọro, na mgbe e mesịrị ụgbọ mmiri. Taa, n'ụzọ ezi uche dị na ya, a raara ya nye ndị njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Oceania » Australia » Ihe ị ga - eme na njem rue Sydney
Ebe ịga njem safari na Africa
Blue Lagoon, spa nke agaghị echefu echefu